जान्नुभएकाे छ : तपाईको बच्चा कत्ति तिक्ष्ण छ ?
जनतापाटी २८ माघ
सबैभन्दा बढी लेडको मात्रा हुने रंगको रुपमा रहेको पहेलो रंगको प्रयोग विद्यालयमा बच्चाहरुले समात्ने ठाउँमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ भने कम लेडको मात्रा रहेको रातो रंग नसमातिने ठाउँमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । तस्वीर सौजन्यः डा केयूर गौतम
काठमाडौं । तपाईको बच्चाको सिकाईमा कत्ति कमजोर छ ? बच्चाले विद्यालयमा गर्ने व्यवहार र घरमा देखाउने व्यवहार कति परिवर्तन भैरहेको छ ? कतै तपाईको बच्चा हरेक दिनजस्तो पेट दुख्यो त भन्दैन ? यदी यस्तो छ भने तपाईको बच्चाको रगतमा लेडको मात्र बढी हुनसक्छ ।
लेड रगतको माध्यमबाट शरीरका हरेक अंगमा असर पार्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । रगतमा लेडको मात्रा बढी भएको बच्चाको व्यवहार र सिकाईमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यस्तै बच्चाको बुझ्ने क्षमता र सक्रियतामा ह्रास आउनुको पछाडीको कारण रगतमा लेडको मात्रा बढी भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
‘यदी तपाईको बच्चाको शारिरीक वृद्धीदर ढीलो छ र श्रवण शक्ति कमजोर छ भने तपाईको बच्चाको रगतमा लेडको मात्रा बढी भएको हुनसक्छ,’ सम्यक डाइनोस्टीकका प्याथोलोजिष्ट डा. केयूर गौतमले भने, ‘बच्चाको रगतमा लेडको मात्रा बढी भएको बच्चालाई रक्तअल्पता हुन्छ ।’ रगतमा लेडको मात्रा बढ्दै १ सय ५० माइक्रोग्राम प्रति डेसिलिटर पुग्दा मृत्यु हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बच्चाको रगतमा ५ माइक्रोग्राम प्रति डेसिलिटर र वयस्कको हकमा १० माइक्रोग्राम प्रति डेसिलिटरसम्मलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ । ‘लेड टक्सीक हेवी मेटल हो, यो शरीरमा प्रवेश गरेपछि बाहिरिँदैन,’ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका डा. खेमबहादुर कार्कीले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार लेडका कारण विश्वमा ६ लाख बच्चामा बोधोपन देखिएको छ ।’ उनले लेड प्रदुषणका कारण विश्वमा १ लाख ४३ हजारको मृत्यु हुने गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरे ।
उनका अनुसार खाना, हावा, रंग, माटोलगायतका माध्यमबाट मानव शरीरमा लेड प्रवेश गर्दछ । विशेषगरी इनामेल र खेलौनासंग बच्चाहरु सबैभन्दा बढी नजिक हुने हुँदो बालबालिकाको सरीरमा लेडले बढी प्रभाव पारेको उनले जानकारी दिए । परिषदले गत वर्ष उपत्यकाका तीन अस्पतालमा ३ सय १२ बच्चाहरुको रगत परिक्षण गरेको थियो । ‘परिषदको नेतृत्वमा काठमाडौंको त्रीवी शिक्षण अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल र भक्तपुरको सिद्धि मेमेरियल अस्पतालमा १ सय ४ जनाका दरले बालबालिकाको रगत परिक्षण गरिको थियो । जसमा ६ महिनादेखि ३६ महिनासम्मको बालबालिकाको रगत परिक्षण गरिएको परिषदले जनाएको छ ।
परिक्षणमा १० प्रतिशत बच्चाहरु लेड फ्री थिए भने २६ प्रतिशत बालबालिकामा शुन्य दशमलव १ देखि ५ माइक्रोग्राम प्रति डेसिलिटर लेडको मात्रा पाइएको थियो । यस्तै ६४ प्रतिशत बालबालिकामा ५ दशमलव १ देखि ४५ माइक्रोग्राम प्रति डेसिलिटर लेडको मात्रा भेटिएको थियो । बच्चाहरुको रगतमा लेडको मात्रा बढी हुनुको कारण विभिन्न रंगमा मिसिएका लेड नै भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
यस्तै सम्यक डाइनोस्टीकले काडमाडौं र विरगञ्जका बालबालिकाको रगतमा लेडको मात्राको परिक्षण गरेको थियो । परिक्षणले काठमाडौंको तुलनामा विरगंञ्जका बालबालिकाको रगतमा लेडको मात्रा बढी पाइएको थियो । यो अध्ययनले पनि ६२ प्रतिशत बालबालिकामा ५ देखि ४६ माइक्रोग्राम प्रति डेसिलिटरसम्म रगतमा लेडको मात्रा रहेको पाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी विभिन्न रंगहरुको माध्यमबाट बच्चाहरुको रगतमा लेडको मात्रा बढेको पाइन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी पहेलो रंगमा लेडको मात्रा बढी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । पहेलो रंगमा करिव ४ माइक्रोग्राम प्रति वर्गसेन्टीमिटर हुन्छ भने हरियोगमा १ दशमलव १, खैरो रंगमा शुन्य दशमलव ९, रातोमा शुन्य दशमलव ५ कालोमा शुन्य दशमलव ३५, निलो शुन्य दशमलव २ र सेतो शुन्य दशमलव १ माइक्रोग्राम प्रति वर्गसेन्टिमिटर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।